SS pombi yekubatanidza | Bata Pipe
SS pombi yekubatanidza
Isu tiri nhamba yekutanga mubhokisi rako rekuyera, ichipa yakanyanya kukosha indasitiri-kukuita kuti uve nehungwaru uye nhanho imwe kumberi mune ino inokurumidza kuchinja uye kukwikwidza musika.
Dzinosvika makumi mana muzana yemapaipi emiti yemagetsi mapaipi ekushandisa epasi. Kusarudza iyo chaiyo yekubatanidza nzira inogona kubatsira kuwedzera kugona uye kuve neakakura kukanganisa kune hupfumi mabhenefiti echirongwa chose
Indasitiri yekugadzira magetsi muUnited States iri kukura nekukurumidza, uye makambani anovaka nekutarisira zvirimwa zvemagetsi ari kuchinjawo. Huwandu hwemagetsi gasi masisitimu ari kuwedzera, uye huwandu hwenzvimbo dzemagetsi munyika dziri kuwedzera. Simba rinowedzerwazve senge mhepo, zuva uye hydropower iri kushandisa gasi rechisimba senzvimbo yemafuta.
Nhasi, yakaderera mbishi yezvinhu zvinodhura zvakagadzira pateni mune akawanda mafuta sosi akaenzana, uye mitezo yemagetsi inovandudzwa iri kuwedzera kuve inozivikanwa. Mhedzisiro iri pachena yekushandukira gasi rechisimba uye simba rinowedzerwazve nderekuti United States ine zvirimwa zvemagetsi zvemarasha zvishoma kupfuura zvayakamboita. Makore mashoma apfuura, marasha aishandiswa kupa simba ingangoita 75% yezvivakwa. Nhasi, pasi pe35% yezvirimwa zvemagetsi zvinoshandisa marasha.
Izvo zvivakwa zvekugadzirwa kwesimba zvakagadziriswawo, uye shanduko idzi dzakanganisa kuitwa kwezvizvarwa zvitsva uye kugadzirisa. Makumi gumi apfuura, mainjiniya, kutenga uye kuvaka (EPC) zvibvumirano zvakangoonekwa muindasitiri yekugadzira magetsi. Mazuva ano, zvibvumirano zve EPC zvakajairika, uye makambani mazhinji uye akawanda anopa yakatarwa-mutengo EPC purojekiti kuendesa mune inokwikwidza nharaunda.
Kutsvaga nzira dzekudzora pane-saiti nguva yekushanda uye kuwedzera kugona kwekuvaka kwave chikamu cheichi chitsva chakajairika. EPC iri kugadzira dhizaini yekutendeuka iyo inogona "kucheka nekunamatira" mune ramangwana basa rekupa mhinduro dziri nyore. Kuitwa kwakabudirira kwezviyero izvi kwakatungamira mukudzikiswa kwakakura muchirongwa cheprojekti, icho chakachinja zvachose tarisiro yevaridzi veaseti. Nhasi, zvinokwanisika kupedzisa gasi-rinodzima gasi magetsi mumakore maviri nehafu, tichienzanisa nemakore mashanu apfuura makore mashoma apfuura. Izvi zvinoreva kuti fekitori inogona kuburitsa magetsi uye nekuunza mari muhafu yenguva.
Kubva pamaonero emuridzi, sarudzo yekupa kazhinji mapurojekiti inoenderana nekambani inokwanisa kuvaka fekitori nekukurumidza uye nehunhu hwakanakisa, nokudaro nekukurumidza kuchinjira mukugadzira uye kugadzira mari. Kune makambani ekuvaka, izvi zvinowedzera matanda uye zvinopa mukana wekukwikwidza kumakambani anokwanisa kusangana nezvirongwa zvinokurumidza.
Kunyangwe hazvo shanduko zhinji dzaitika muindasitiri yekugadzira magetsi, zvimwe zvinhu zvakakosha zvakaramba zvakadaro. Kune makambani ekuvaka, vanhu vanogara vachitarisira kupa kuchengetedzeka, kugona, kuvimbika uye mhando. Kunyangwe zviite sei zvinosangana neprojekti, varidzi vanotarisira kuti kambani yekuvaka ichawana mhedzisiro nenguva uye pabhajeti isina kukanganisa chero izvi zvakakosha zvinodiwa.
Varidzi vezvirimwa zvemagetsi vari kuita sarudzo dzekudyara mapurojekiti matsva uye ekudzokorodza, uye magetsi mazhinji anoshandisa gasi chairo semafuta. Sekureva kwedata kubva kuUS Energy Information Administration, iyo yakaunganidza nhevedzano yedata kubva kuUS indasitiri yemagetsi, avhareji mutengo wekuvaka wemagasi emagetsi gasi muna 2017 yaive US $ 920 / kW. Izvi zvakati kwirei kupfuura mutengo wekuvaka gwenya remagetsi rinotyairwa nemafuta epeturu, asi zvakachipa kwazvo pane kuvaka fekitori inotyairwa nemagetsi anovandudzwa.
Pamusoro-pevhu pombi yekubatanidza yakafanana neyakagadzika. Chero ani zvake akambotora chikamu muzvirongwa zvinosanganisira kuwelda anoziva kuti Welding inounza matambudziko. Chibvumirano chebasa rinopisa chinofanira kuwanikwa usati watanga basa, uye kuwelding inoda vashandi vane hunyanzvi, izvo zvisiri nyore kuwana nguva dzose, kunyanya mumusika wanhasi wevashandi. Uye zvakare, sezvo kuwaya kuchitsamira pane mamiriro ekunze, mamiriro akashata anononoka kufambira mberi. Mumamiriro akaoma uye nemhepo, kutenderera kunowanzoda kuongorora moto, zvinoreva kuti vamwe vashandi vanofanirwa kutumirwa panzvimbo uye zvinogona kukuvadza.
Panzvimbo pekunamatira kune iro rinowanzoitwa basa, zvingave zvinobatsira kutambanudza iyo mesh yakafara uye funga kushandisa zvine michina zvakapatsanurwa couplings panzvimbo peye welding. Pombi dzekushandisa dzinoshandiswa mumvura yepombi, inotonhorera mvura, masystem emhepo, glycol uye nitrogen masystem, aya mapaipi anogona kuverengerana 30% kusvika 40% yezvikamu zvepombi zveiri basa, uye kushandiswa kwemajoini akabatanidzwa (Mufananidzo 1) Tungamira kune mutengo wekuchengetedza.
1. Slotted michina majoini anogona kuchengetedza yakawanda mutengo uye kugadzirisa kunyatsoita kweruzhinji mapaipi pasi. Kutendeseka: Victaulic
Grooved mechanical michina yekubatanidza inozivikanwa kwazvo kune mazhinji EPC nemakambani ekuvaka. Kwemakore, vanhu vazhinji vakashandisa tekinoroji iyi mukudzivirira moto, kudziyisa, kufefetedza uye mamiriro emhepo (HVAC) masystem. Vemakondirakiti vanowanzo shandisa izvi zvinongedzo kuti zviwedzere kumhanya uye kuvimbika, uye nekuvandudza kuchengetedzeka. Kuisirwa kwekubatanidza hakudi kushandiswa kwepamusoro-tembiricha basa kana kupisa mvumo, saka iyo yekumisikidza haizoburitswe muhutsi kana murazvo, uye hapana chikonzero chekutarisana netangi remvura, torch kana lead panguva yekumisikidza maitiro.
Vashandi manejimendi chikamu chakakosha chebasa rega rega rekuvaka, uye munhu wese muindasitiri yekuvaka anofanirwa kubata nekushomeka kwevashandi vane hunyanzvi. MuNorth America, kutsvaga vanhu chaivo vane hunyanzvi hunodiwa kwave kunetsa, uye kushomeka kwevashandi kune zvakakanganisa chirongwa cheprojekti.
Nhasi, kushomeka kwevashandi muNorth America kwakanyanya kupfuura nakare kose, uye hapana mhinduro kudambudziko iri. Icho chokwadi ndechekuti kana chirongwa chikashaiwa basa rezvakakosha zviitiko sekumwaya, iko kunokanganisa chirongwa kuchave kwakakura.
Iko kushandiswa kwema mechanical grooved couplings inzira yekuvandudza uye inodhura. Inofananidzwa nekutenderera, tekinoroji iyi ine zvayakanakira nekuti haidi kupisa kwekupisa, hapana mvumo yekupisa, hapana moto wekurinda uye maX-ray, uye dhizaini yakapusa yedhizaini yekubatanidza inogona kuiswa ichishandiswa zvakajairika ruoko maturusi.
Mune chirongwa chazvino, vanopfuura makumi maviri nemapombi vanokodzera vakave vakadzidziswa kuisa michina yakaboorwa majoini pasi pemaminitsi makumi maviri. Iri timu rinokwana pombi rinogona kukurumidza kuita chirongwa chose pasina tsaona. Paavhareji, kunyangwe kune vanotanga, kuisa iyo slotting mechanical system iri 50% kusvika 60% nekukurumidza kupfuura kuwelding (Mufananidzo 2).
2. Inofananidzwa neyakaomeswa, iyo yekumisikidza nguva yeakakomberedzwa michina majoini anokurumidza uye anoshanda. Kutendeseka: Victaulic
Imwe mukana wekushandisa michina yakamonerwa yekubatanidza ndeyekuti iyo sisitimu inogona kugadzirirwa, iyo isingangopa chete kuenderana kwechigadzirwa, asi zvakare inochengetedza nguva nekuti iyo spool inogona kuiswa panzvimbo yekuvaka. Zvichienzaniswa nesangano repano-saiti, kugadziridza kunogona kuchengetedza kugadzirwa kwakawanda uye kugadzirisa kuchengetedzeka.
Kunyatso kuisirwa kwakakosha kune zvikamu mumagetsi emagetsi, zvinova zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti kuve nechokwadi chekuti kudzidziswa uye kugona kwei welders kwakakosha. Zvakaoma kusiyanisa mhando yemashure akapedzwa nekucherechedza, uye kunyangwe bvunzo kana maX-ray hazvigone kuona zvisina kusimba welds. Welding isingaitwe inogona kudhura kwazvo, zvichitungamira mukurasikirwa kukuru kwemuviri uye kwemari nekufamba kwenguva.
Kuonekwa kwema mechanical slotted couplings kunogona kuongororwa, kurerutsa kutonga kwehunhu uye kugonesa vanoisa kuti vatombove nehunyanzvi hwekuona kuti yega yekubatana yakaiswa nemazvo. Izvi zvinobvisa mamwe magwaro ekudzora emhando yepamusoro anodikanwa pakuwongorora, kusanganisira X-ray uye / kana dhayi inopinza yekuedza.
Mechaniki majoini zvakare zvakareruka kuchengetedza. Pachivanhu, kugadziriswa kwemajoini akasunganidzwa kunotora nguva uye kunodhura. Nekudaro, kutsiva michina yakamonerwa majoini kuri nyore sekuisa, uye sezvo anenge munhu wese anoshanda munzvimbo yemagetsi anogona kudzidziswa kuzvitsiva mukati memaminetsi mashoma, kukosha kwakakosha kwekuchengetedza kunogona kuwanikwa mukufamba kwenguva (Mufananidzo 3). Tichifunga kuti chiwanikwa chemagetsi chiuru cheMWM chinogona kuburitsa madhora miriyoni imwe mumari yezuva nezuva, kudzikamisa nguva iyo simiti yemagetsi inogona kunge isipo kana pasi penzvimbo izere kunogona kuunza mabhenefiti akakura.
3.Kuenzaniswa nemhinduro dzesimbi, kushandiswa kweVictaulic mhinduro kunogona kuita kuti vashandi vabudirire. Kutendeseka: Victaulic
Mechanical grooved couplings ave achishandiswa kwemakore mazhinji mune akawanda magetsi emagetsi ekushandisa munzvimbo dzinoverengeka dzemhando yepamusoro. Iyi tekinoroji yakashandiswa kweanopfuura makore zana uye ine yakavimbika rekodhi.
Pakati peyakaomeswa nguva yekudzima chirimwa chemagetsi emagetsi muNew Jersey, iyo yekumisikidza slotting mhinduro yakabvumidza kuiswa kwemvura nyowani inotonhorera uye ekudzivirira moto mukati menguva dzakaomarara. Mune imwe fekitori muPennsylvania, michina yakamonerwa yakabatanidzwa yaishandiswa kumanikidza mitsara yemhepo uye tambo yemhepo mitsara kusangana neyakakurumidza nguva yekuvaka; zvakafanana, fekitori muArkansas yakashandisa chiridzwa mweya, yakamanikidzwa mweya nechikonzero chimwe chete. Iyi tekinoroji inoshandiswa mumhepo, deionized mvura uye kutonhora mitsara yemvura. Mune chirongwa cheshanduko chegwenya remagetsi muAlaska, basa repamusoro-tembiricha haribvumidzwe pane saiti uye hunyanzvi hwevashandi husipo. Iyo sisitimu inoshandisa iyo yakashongedzwa michina pombi yekubatanidza sisitimu kusimudzira kune yekuwedzera system yehutsi turbine mvura inopa, nokudaro ichipa mhinduro Iyo haisi chete inosangana nezvinodiwa zvekusaita yakakwira-tembiricha mashandiro, asi zvakare inochengetedza zviuru zvemadhora mukushanda uye purogiramu.
Kufanana nemamwe maratidziro, chikamu chekuvaka chiri pasi pekumanikidzwa kuti chiwedzere kushanda pamwe nekuchengetedza mari. Izvi zvinoisa zvakakwirira zvinodiwa kumuridzi, EPC uye kontrakta. Iye zvino kupfuura nakare kose, pane chikonzero chekuongorora nekushandisa nzira dzekuvandudza dzekubudirira kuita pa-bhajeti kana kunze-bhajeti mapurojekiti.
Kana mamiriro emusika akaganhurirwa uye achinetsa, kupa mhinduro dzakavimbika kunonyanya kukosha. Kunyangwe zvingaite senge zvinopesana kutora nzira yakasiyana mune aya mamiriro akaomarara, muchokwadi, mune iyi kesi, mhinduro dzetsika dzinogona kuva chipingamupinyi chikuru. Hapana imwe nguva iri nani pane ikozvino yekufunga nezve kushandisa Victaulic mechina yakaboorwa pombi yekubatanidza masisitimu kunze kweiyo furemu. ■
-Dan Christian inyanzvi yeVictaulic ine simba uye petroleum injinjini uye mukuru wepasi rose musika musika, nepo Chris Iasielo, PE inyanzvi yekugadzira magetsi yeVictaulic.
Imwe yepasirose yekutanga yakagadziriswa simba rezuva (CSP) zvirongwa zvinoshandisa "Stellio" heliostats…
Kupedzisa kutanga-up uye kutumwa kwegadziriro yemagetsi zvinowanzoreva kusundira mukuru wekontrakta kupedzisa zvese zvakasara…
Kune varidzi uye vanogadzira magetsi emagetsi, zvinogona kunetsa kusarudza pakati peyakareruka kutenderera kana mubatanidzwa ...